जाडोबाट बच्‍न कस्तो खाना उपयुक्त्त हुन्छ? – News Dainik
News desk २८ मंसिर २०७६, शनिबार १०:३३ स्वास्थ्य प्रतिकृया दिनुहॊस
काठमाडाैँ । मङ्सिर महिना सकिनै लाग्दा जाडो दिन प्रतिदिन छिप्पिँदै गएको छ। चिसो बढ्दै जाँदा जाडो छल्न न्याना, बाक्ला कपडा आवश्यक हुन्छ। तर, कपडाले बाहिरी भाग तताएर मात्र हुँदैन। शरीरको भित्री भाग तात्तिनु जरुरी हुन्छ। त्यसैले यसका लागि खानपानमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।
जाडोबाट बच्न नियमित पोसिलो खानेकुरा समावेश गर्न आवश्यक हुन्छ। जाडोमा चिया नियमित कागति, अदुवा, मरिच हालेर चिया पिउँदा शरीरलाई निकै फाइदा गर्ने पोषणविज्ञ डा. अरुण उप्रेती बताउँछिन्।
‘अदुवा र कागतिमा रोगसँग लड्ने शक्ति भरपुर मात्रामा पाइने हुँदा यसलाई नियमित सेवन गर्न सकिन्छ। वातावरणमा आएको परिर्वतनसँगै खानामा ख्याल नपुर्‍याउँदा यो समयमा रुघाखोकी, दम, श्वासप्रश्वास, जोड्नीको दुखाइलगायतका रोगले आममानिसलाई निकै सताउने गर्दछ। खासगरी बालबालिका र वृद्धवृद्धा यसबाट बढी पीडित हुने गरेको डा. उप्रेती बताउँछिन्।
अघिल्लॊ बलात्कारको आरोपमा युवक पक्राउ
पछिल्लॊ मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु